CTO: Mirongatra ny fizahantany any Karaiba
Home » Travel Associations News » CTO: Mirongatra ny fizahantany any Karaiba
Ny sehatry ny fizahan-tany any Karaiba dia vinavinaina hanoratra fitomboana matanjaka amin'ny taona 2019 raha ny fahombiazana tamin'ny fampisehoana matanjaka kokoa tamin'ny taona lasa.
Ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO), izay manam-pahefana amin'ny statistikan'ny fizahantany isam-paritra sy ny zava-bita, dia maminavina ny fitomboana 6-7 isan-jato amin'ity taona ity, ary mitohy fironana miakatra izay nanomboka ny volana septambra lasa teo.
“Vinavinainay fa ny fahatongavan'ireo mpizahatany dia hitombo eo anelanelan'ny enina ka hatramin'ny fito isan-jato amin'ny taona 2019, satria miverina amin'ny toerany ireo fotodrafitrasa simba ao amin'ireo toeran-doza vokatry ny rivodoza. Toy izany koa ireo mpitsangatsangana an-tsambo dia tokony hitombo efatra isan-jato ka hatramin'ny dimy isan-jato ”, hoy i Ryan Skeete, talen'ny fikarohana nataon'ny CTO, nandritra ny valandresaka nifanaovana tamin'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany any Karaiba tao amin'ny foiben'ny CTO io maraina io.
Skeete dia nitandrina ny amin'ny mety hisian'ny “lakilety lehibe hamakivaky”, anisan'izany ny vokatry ny fifampiraharahana Brexit tany Angletera, ny ady varotra eo amin'i Etazonia sy i Shina ary ny mety ho trangan-javatra mahatsiravina any amin'ny toerana itodiana sy tsena.
Na izany aza, hoy izy, miaraka amin'ny fangatahana eran-tany ho an'ny dia iraisam-pirenena andrasana hijanona ho matanjaka, tohanan'ny hetsika ara-toekarena mahasalama, ary miaraka amin'ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny rivotra izay manampy amin'ny fanamafisana ny fahatongavana, ny fomba fijery ny fizahan-tany any Karaiba amin'ny taona 2019 dia be fanantenana.
Ny talen'ny fikarohana CTO dia nanambara fa ny fitomboana 9.8 isan-jato matanjaka nandritra ny volana septambra ka hatramin'ny desambra lasa teo dia nanjary fampisehoana matanjaka noho ny novinavinaina. Fiovana lehibe io raha oharina amin'ireo delestazy valo volana teo aloha.
"Na ireo toerana nitondran'ny tafio-drivotra 2017 aza, na dia efa nisoratra anarana aza ny fihenan'ny tarehimarika indroa tamin'ny taon-dasa, dia niaina fiovana lehibe nandritra ny efa-bolana lasa izay, tamin'ny fisoratana anarana ny fiakarana avo telo heny nandritra io fotoana io," hoy i Skeete tamin'ny fampahalalana izay nalefa 'mivantana' ho an'ny mpihaino iraisam-pirenena.
Ny fitsidihan'ny mpizahatany 29.9 tapitrisa tamin'ny taona 2018 dia solontenan'ny mpitsidika farany ambony indrindra tany Karaiba, izay nihoaran'ny 30.6 tapitrisa izay nitsidika tamin'ny taona 2017. Ary na dia 2.3 isan-jato aza ny fihenan'ny ankapobeny dia tsara kokoa fa ny telo isan-jato andrasana fahalavoana efatra isan-jato.
"Miaraka amin'ny fampisehoana matanjaka nandritra ny efa-bolana farany tamin'ny taona 2018, anisan'izany ny fampisehoana matanjaka nataon'ny firenena tratry ny rivodoza 2017, ny porofo dia manondro fa mirongatra ny fizahantany any Karaiba," hoy i Skeete nanambara.
Raha ny angom-baovao voaangona avy amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny CTO dia i Canada no tsena matanjaka indrindra - ny fitsidihana 3.9 tapitrisa izay nampiseho fiakarana 5.7 isan-jato. Ny tsena intra-Caribbean dia nanana ny zava-bita tsara indrindra hatrizay, nahatratra roa tapitrisa ny mpitsidika, raha i Amerika atsimo kosa dia namokatra fitsidihana mpizahatany 1.9 tapitrisa, maneho ny fiakarana 3.6 isan-jato.
Ny fahatongavana avy tany Eropa dia nitombo 1.3 isan-jato antonony, ary ny fahatongavan'ireo UK dia nijanona ho 1.3 tapitrisa eo ho eo.
Saingy, nidina i Etazonia, izay mijanona ho tsena lehibe indrindra any amin'ny faritra, miaraka amin'ireo fitsidihan'ny mpizahatany amerikanina 13.9 tapitrisa izay nahitana fahalavoana 6.3 isan-jato. Izany dia vokatry ny fihenan'ny haavon'ny fahatongavan'ny olona tamina toerana malaza voadonan'ny rivodoza, toa an'i Puerto Rico, izay nilatsaka 45.6 isan-jato, ary i St. Maarten, izay nilatsaka 79 isan-jato.
Na eo aza izany dia nisy fiakarana 28 isan-jato ara-pahasalamana ny fahatongavan'i Etazonia tamin'ny telovolana fahefatra, naneho ny fiovana mahery vaika nandritra io vanim-potoana io.